Aragtidayada isbeddelka (hoosta) waxay khariidaysaa laba dariiqo isku dhafan oo kala duwan oo loo marayo hawshayaga oo loogu talagalay inay saameyn ku yeeshaan. Mid ka mid ah waa taageeridda nidaamyada beeraha (beeraha shakhsi ahaaneed iyo beeraha ku xeeran aagga oo wadaagaya dabeecadaha caadiga ah, dhaqanka, iyo sifooyinka dhaqan-dhaqaale) si loo hagaajiyo waxqabadka heerka beerta. Midda kale waa taageerada hay'adaha (hay'adaha cilmi baarista, ururada beeraleyda, ururrada aan dowliga ahayn iyo kuwo kale) si loo kordhiyo qiimaha iyo saameynta cilmi-baarista beeraha iyo horumarinta, kuwaas oo saldhig u ah hagaajinta joogtada ah ee beeraha.
Waxaan si joogta ah u tijaabinnaa, dib u eegnaa, oo nadiifinnaa aragtida isbeddelka labadaba si loo hagaajiyo barnaamijkeena iyo sidoo kale kuwa deeq bixiyeyaasheena iyo inaan isticmaalno waxa aan baraneyno si aan uga faa'iideysano khayraadka weyn ee bulshooyinka. Deeqda ayaa sidoo kale laga codsanayaa in ay sameeyaan aragti cad oo ah dukumiintiyada isbeddelka. Barnaamijka iyo aragtida mashruuca dukumiintiyada isbedelka ayaa si joogta ah loo adeegsadaa loona daahfuray.
Mawduuca: Cilmi-baarista Xoolaha Iskaashatada, International